My World: ပေါပ့်ဘုရင်မ မက်ဒေါနားရဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်ည
Posted by PhyoPhyo at Sunday, October 18, 2009 Labels: ဂီတပွဲအတွေ့အကြုံဆောင်းပါး, ပေါပ့်ဘုရင်မ မက်ဒေါနားရဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်ည
ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့က ဂီတပရိတ်သတ်တွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ ညတညရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ညမှာ နယူးဘဲလ်ဂရိတ် အူးစ်ချက်(Ušće)စူပါမားကတ်အနီးက အူးစ်ချက်ပန်းခြံကွင်းပြင်မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေက အဲဒီအူးစ်ချက်မှာပဲ ဘီယာပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဥရောပ ဘီယာတွေအများစု တွေ့ရပြီး Beck's, Heniken လောက်သာ သိလိုက်ပါတယ်။ ဘီယာပွဲတော်မှာတော့ ဆားရ်ဘီးယန်းလူငယ်ဂီတအဖွဲ့တွေ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ (Serbian လို့ အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးပေါင်းမှာ သူတို့က ဆားရ်ဘီးယန်းလို့ရသံပီပီသသထွက်ပြောပါတယ်) ABBA သီချင်းတွေကို မူရင်းအတိုင်း သီဆိုသွားတယ်။ ဘီယာခွက်တွေကိုင်ရင်း Money Money Money လို့ သံပြိုင်သီဆိုနေခဲ့ကြတဲ့ ဆားရ်ဘီးယန်းလူငယ်တွေကို တွေ့ဖူးထားတော့ အခုတစ်ခါ ပေါပ့်ဘုရင်မ မက်ဒေါနားသီချင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေကြမလား သိချင်မိတယ်။ လက်မှတ်မှာ ကင်မရာယူခွင့်မရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းယူနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။
ည ကိုးနာရီမှာ မက်ဒေါနားက စပြီးဆိုမယ်လို့သိထားကြပေမဲ့ ခပ်စောစောပဲ အူးစ်ချက်ကွင်းပြင်ဆီထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အခုအချိန်က နွေရာသီဆိုတော့ နေ့တာသိပ်ရှည်လွန်းတယ်။ မနက် ၅နာရီမိုးလင်းနေပြီး ညဆို ၈နာရီခွဲလောက်မှ နေ၀င်တော့ အူးစ်ချက်ကွင်းပြင်ရှေ့အရောက် ၈ နာရီကျော်နေပေမဲ့ နေ၀င်ခါစ အချိန်ပါ။ လမ်းတစ်လျှောက် ဆားရ်ဘီးယန်းလူငယ်တွေ အူးစ်ချက်ကွင်းပြင်ဆီ လှုပ်လှုပ်ခပ်ခပ် သွားလာနေကြတယ်။ ဥရောပသားတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအတိုင်း ဂီတညတစ်ညနဲ့အပြိုင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေကြပြီ။ အနက်ရောင်၊ ဆံပင်ရှည်လျားလျား ဆားရ်ဘီးယန်းလူငယ်တွေ တွေ့ရပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ဂီတပွဲတွေမှာ အားလုံးနီးပါး အနက်ရောင်လူငယ်တွေ ပြည့်သိပ်နေကြတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူငယ် ဂီတပရိတ်သတ်တွေလောက် အနက်ရောင်သိပ်မကြိုက်ကြဘူးလို့တောင် အတွေးဝင်မိပါသေးတယ်။
မီးအရောင်စုံထွက်နေတဲ့ မျက်မှန်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ ခပ်ရွယ်ရွယ်မိန်းကလေးတွေက အဖြူရောင်နဲ့ အရောင်ခပ်လွင်လွင် တောက်တောက်ပပ ၀တ်ဆင်ထားကြတယ်။ ကွင်းပြင်ရှေ့ ရင်ပြင်မှာ လူငယ်တွေအုပ်စုလိုက်ပြည့်သိပ်နေကြပြီ။ ဆားရ်ဘီးယန်မိသားစုတွေပါ ကလေးငယ်လေးတွေလက်ဆွဲလို့ ကွင်းထဲကို ၀င်ဖို့ တန်းစီနေကြပြီ။ ကွင်းထဲကိုအသွားလမ်းမကြီးကို အလယ်က သံဇကာတွေ အပြည့်ကာထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကွင်းထဲကိုအသွား လမ်းမတစ်လျှောက် ရဲသုံးယောက် ၂ယောက်တစ်စုစီ လုံခြုံရေးအပြည့်အသိပ် ချထားတယ်။ ကွင်းထဲမှာသီချင်းသံတွေဆူညံနေပါပြီ။ ဆားရ်ဘီးယန်းလူငယ်တွေလဲ ကခုန်နေကြပြီ။ မက်ဒေါနားမဆိုခင် တခြားဂီတအဖွဲ့တွေဖျော်ဖြေနေကြတယ်။ စင်မြင့်ရဲ့ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ တလက်လက်တောက်နေတဲ့ M ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေက စင်ရဲ့အမြင့်ထက်တောင်ပိုကြီးနေပါသေးတယ်။ ကွင်းရဲ့ညာဖက်နားမှာ မသန်စွမ်းသူတွေ ကြည့်နိုင်မယ့်စင်မြင့်ခပ်သေးသေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး ၄၊ ၅ ယောက် လောက်တွေ့လိုက်ရတယ်။ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝတ်စုံတွေနဲ့ ဆေးအဖွဲ့သားတွေကိုလဲ ခပ်များများတွေ့ရတယ်။ ည ကိုးနာရီခွဲပြီးတဲ့အထိ မက်ဒေါနားက ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပါသေးတယ်။ ကွင်းထဲကဆားရ်ဘီးယန်းဂီတပရိတ်သတ်တွေက ကိုယ့်အစုနဲ့ကိုယ် ကခုန်နေကြတယ်။ မက်ဒေါနားကိုစောင့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေက When you call my name its likealittle prayer.. I'm down on my knees.. I wanna take you there ... လို့ အော်ဟစ်သီဆိုကြတယ်။ မက်ဒေါနားရဲ့ သီချင်းတော်တော်များများ သူတို့သိထားကြပါတယ်။ တပုဒ်ပြီးတပုဒ် အော်ဟစ်သီဆိုနေကြပေမဲ့ မက်ဒေါနားက ၁၀ နာရီထိုးခါနီးအထိ ပေါ်မလာသေးပါဘူး။
၁၀နာရီထိုးခါနီးတော့ စင်မြင့်ဘေးက LED screen ကြီးနှစ်ခုမှာ ကြော်ငြာတာတွေရပ်သွားပြီး M ဆိုတဲ့စာလုံးကိုပဲပြထားတယ်။ မက်ဒေါနားရဲ့သီဆိုပုံကိုကြည့်ချင်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ပိုပိုပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြတယ်။ ၁၀ နာရီကျော် ပြီး ၃ မိနစ်လောက်မှာတော့ count down လုပ်တဲ့ ၅ ၄ ၃ ၂ ၁ အသံကြားလိုက်ရပြီး မက်ဒေါနား ပရိတ်သတ်မြင်ကွင်းထဲ ရောက်လာတယ်။ မီးရောင်စုံတွေက ဟိုကဒီကလင်းလက်ကုန်တယ်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေလေထဲမြောက်တက်ကုန်ကြတယ်။ CANDY SHOP သီချင်းနဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ်ဂီတညကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ C.. A.. N.. D.. Y ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ playback screen မှာ ထိုးပြပြီး ကြွက်သားအဖုဖုနဲ့ တက်ကြွသွက်လက်နေဆဲ ပေါ့ပ်ဘုရင်မက ခုန်ပေါက်သီဆိုပါတယ်။ အနက်ရောင် ၀တ်စုံဝတ်ထားပြီး I'll be your one stop လို့ဆိုတယ်။ သီချင်းက ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ဆားရ်ဘီးယား ဂီတပရိတ်က သိနေကြတယ်။ အားပါးတရ လိုက်ဆိုကြတယ်။ my sugar is raw, sticky and sweet လို့ဆိုတဲ့ rap စကားပြောဆန်ဆန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ music video မှာလို နားထောင်ရသိပ်မကောင်းပါဘူး။ အတီးနဲ့ ကွဲထွက်သွားတယ်။
CANDY SHOP ပြီးတော့ All right Serbia, this is what I am talking about ဆိုပြီး ဆားရ်ဘီးယန်းပရိတ်သတ်နဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်၊ အဖွဲ့သား ဗြိတိန်လူမျိုး DJ Paul Oakenfold ကို မက်ဒေါနားက မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ နောက်တော့ tick tock tick tock tick tock ဆိုတဲ့ မက်ဒေါနားအဆိုနဲ့ အတူ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်ဆယ်ဖို့ ၄မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းတေးသွားပေါ်လာပေမဲ့4MINUTES သီချင်းကိုမဆိုပဲ VOGUE သီချင်းကို အဲဒီ tick tock တေးသွားနဲ့သီဆိုသွားပါတယ်။ playback ပုံရိပ်တွေမှာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ဆိုးဝါးတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပုံ ဟစ်တလာ၊ ရောဘတ်မူဂါဘီ၊ ကင်မ်ဂျုံအီ၊ မာမွတ်အာမက်ဒီနီဂျက်(မြန်မာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအပါအ၀င်)ပြထားပြီး ကမ္ဘာကြီးကပ်ဘေးသင့်နေပုံ၊ စစ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ လဲပြိုနေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ၊ အစားအစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေပုံတွေပေါ်လာပြီး၊ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို မာသာထရီဇာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတွေ နဲ့ယှဉ်ပြသွားတယ်။ ပြီးတော့ ငွေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ ကားတစ်စီးနဲ့ အဖွဲ့သားခုနှစ်ယောက်လောက်နဲ့အတူ မက်ဒေါနားကားပေါ်ကဆင်းလာလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ငွေရောင်ကားနဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ကထွက်ခွာကြတယ်။
ဦးထုတ်ဖြူဆောင်းထားတဲ့မက်ဒေါနားက ဂစ်တာကိုတီးရင်း MILES AWAY သီချင်းကိုဆိုတယ်။ MILES AWAY သီချင်းအပြီး စင်နောက်ကိုပြေးသွားတဲ့မက်ဒေါနားက တောက်ပလွန်းတဲ့ မီးရောင်တွေအပြောင်းအလဲကြားမှာပဲ ၀တ်စုံလဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ဖော်မြူလာဝမ်းကားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကားဘီးတွေလျှပ်တပြက် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ကြသလို မက်ဒေါနားအ၀တ်အစားပြောင်းလဲပုံက မြန်ဆန်လှတယ်။ စကပ်တိုတိုအနီရောင် နဲ့ခြေအိတ်ရှည်အနက် အနီအနက်နဲ့ မက်ဒေါနားက သီချင်းဟောင်းတပုဒ် INTO THE GROOVE ကို ကျောင်းသူတစ်ယောက်စတိုင်လ် ချစ်စဖွယ် သွက်လက်လွန်းလှစွာသီဆိုပါတယ်။ အတီးတွေအားလုံးကို live show ပရိတ်သတ်အတွက် ကခုန်ဖို့ dance music တွေပြောင်းထားတယ်။ သီချင်းတိုင်းကို မြန်မြန်ကြီးပဲ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ မက်ဒေါနားရဲ့အသံ electroinc sound ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်။ မက်ဒေါနားရဲ့အကအဖွဲ့သားတွေက သီချင်းကိုသရုပ်ဖော်ကြတယ်။ ခုန်ကြတယ်၊ ကကြတယ်၊ ပရိတ်သတ်တွေပျော်တာထက် စင်ပေါ်ကလူတွေက ပိုတောင်ပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်။ ပရိသတ်တွေခုန်နိုင်တာထက် စင်ပေါ်က မက်ဒေါနားက ပိုပြီးတောင်ခုန်နိုင်ပါသေးတယ်။
INTO THE GROOVE အပြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ဂုဏ်ပြုသရုပ်ဖော်ကြတယ်။ မိုက်ကယ်ဂျင်ဆင်အတိုင်း ၀တ်ဆင်ပြီး မိုက်ကယ်လ်ဂျက်ဆင်အကအတိုင်း ကပြနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ dancer က ဘယ်သူလဲတော့ မသိပါဘူး။ နောက်တစ်ပုဒ် အတွက် မက်ဒေါနားက common common လို့ ဆိုလိုက်တယ်။ ပရိသတ်ရဲ့ အာခေါင်ခြစ်အားပေးသံတွေဆူညံသွားတယ်၊ HOLIDAY လို့ အော်ဟစ်ကြတယ်။ HOLIDAY သီချင်း ကို music can be sucharevelation ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ ပရိသတ်ပါ စင်ပေါ်က မက်ဒေါနားအဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူ ပိုပြီးဟန်ချက်ညီညီ ခုန်ပေါက်သီဆိုကြတယ်။ performer ၂၈ ယောက်၊ dancer ၁၆ ပါဝင်တဲ့ မက်ဒေါနားရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုမှာ ဆားရ်ဘီးယန်းဂီတပရိတ်သတ်တွေကျေနပ်ပုံရပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မူးလဲတာကို ဆေးအဖွဲ့က ပြုစုကုသနေတာကိုလဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျန်တဲ့ ဂီတပရိတ်သတ်အားလုံးနီးပါး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမရှိပဲ ပျော်ရွှင်သွက်လက်နေကြတယ်။
ပထမပိုင်း အပြီး ခဏနားချိန်မှာ မီးအလင်းတွေတလက်လက်၊ ဘီယာစည်တွေကျောပေါ်မှာပိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချို့ ဘီယာသောက်ချင်နေသေးတဲ့ သူတွေအတွက် လိုက်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ beer service ကလဲစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဂစ်တာတီးပြီး YOU MUST LOVE ME ဆိုတဲ့သီချင်းကို ခပ်အေးအေး၊ ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲ သီဆိုပါတယ်။ Where do we go from here?This isn't where we intended to be ... We had it all, you believed in me ... I believed in you.. စာသားတိုင်း ပီပီသသ သီဆိုပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းအဆုံး ဆားရ်ဘီးယန်းဂီတပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချီးမြှောက်တဲ့လက်ခုပ်သံတွေ တခြားသီချင်းတွေထက် ပိုပြီးဆူညံသွားတယ်။ ပြီးတော့ Are you ready to dance? လို့ ပရိသတ်ကိုမေးရင်း အခြေအနေကို မက်ဒေါနားက စူးစမ်းတယ်။
နောက်တော့ LA ISLA BONITA သီချင်းကို ယူကရိန်းဂျစ်ပဆီဂီတအဖွဲ့နဲ့ အတူဖျော်ဖြေပါတယ်။ ဂျစ်ပဆီ ရိုးရာသီချင်းတွေပေါင်းပြီး သီဆိုတယ်။ အနက်ရောင်လက်ရှည်လက်စည်းဖောင်းဖောင်း အနက်ရောင်ဝတ်စုံမှာ ရောင်စုံတလက်လက်ကြိုးတွေစည်းထားတဲ့ ၀တ်စုံက သီချင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။ ရောင်စုံပုတီးတွေလဲ ခပ်များများဝတ်ဆင်ထားတယ်။ I want to be where the sun warms the sky စတဲ့ ... LA ISLA BONITA သီချင်းစားသားတစ်ကြောင်းဆိုပြီးတိုင်း ဂျစ်ပဆီရိုးရာအကနဲ့အတူ တယောသံ၊ အကော်ဒီယံ၊ ဟော်လိုဂစ်တာအတီးတွေက ၀င်ပါတယ်။ ရိုးရာရောင်စုံအ၀တ်အစားတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ မက်ဒေါနားရဲ့ အကအဖွဲ့ကလဲဆားရ်ဘီးယန်း၊ရိုးမေးနီးယန်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယန်းတွေရဲ့ ရိုးရာအကမျိုးလို သွက်သွက်လက်လက်ကကြတယ်။
ပရိသတ်သတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်သံကလဲ သီချင်းစည်းချက်အတိုင်း ဟန်ချက်ညီနေတယ်။ စင်ပေါ်မှာ အသွက်လက်ဆုံး ခုန်ပေါက်ကခုန်ကြတဲ့အခါ စင်အောက်ကပရိတ်သတ်လိုက်မခုန်နိုင်တော့ပါဘူး။ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ပုံ၊ ဗီဒီယိုဖိုင် ရနိုင်သမျှယူကြတယ်။ ပရိသတ်ထဲထိ သွားနိုင်တဲ့ stage row အတိုင်း ပရိသတ်နဲ့ နီးနိုင်သမျှနီးအောင် မက်ဒေါနားနဲ့အဖွဲ့က ကခုန်ရင်းရှေ့ကိုတိုးတိုး သွားကြတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးသံတွေ အူးစ်ချက်ပန်းခြံထဲ ပေါက်ကွဲလွင့်ပျံနေကြတယ်။ LA ISLA BONITA အပြီး Life isamystery... ဆိုတဲ့ Likeaprayer သီချင်းအ၀င်စာသားကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆိုပြီး သီချစ်တစ်ပုဒ်လုံးကို dance music စတိုင်လ်တီးထားပြီး မြန်မြန်ကြီးဆို၊ မြန်မြန်ပဲ ကကြတယ်။ LIKE A PRAYER သီချင်းမှန်းမသိနိုင်လောက်အောင်ကို မြန်ပါတယ်။
FROZEN သီချင်း၊4MINUTESသီချင်းတွေကိုသီဆိုတယ်၊ အဲဒီနောက်တော့ GIVE IT TO ME သီချင်းကို သီဆိုတော့ စင်ပေါ်စင်အောက် မီးရောင်စုံ အလင်းတန်းတွေ စူးစူးရှရှထွက်ပေါ်လာတယ်၊ အပြာရောင်မီးရောင်တွေကဲနေတဲ့စင်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်အ၀တ်အစားနဲ့ မက်ဒေါနားက သေသေချာချာကခုန် သီဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဆီ မီးအလင်းတန်းတွေ စူးစူးရှရှ ဖြာကျလာတယ်။ မီးရောင်စုံတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ် ပြေးလွှားနေသလို ပရိသတ်တွေလဲ ရှုပ်ယှက်ခတ်ကခုန်ရင်း ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ ပရိသတ်တစ်ချို့ လူအုပ်ထဲက တိုးထွက်လာကြတယ်။ နွေရာသီဆိုပေမဲ့ ညလယ်မှာအအေးဓါတ်က ပိုလာပါတယ်။ မက်ဒေါနားက ပရိတ်သတ်ဆီ မိုက်ကရိုဖုန်းကို ထိုးပေးရင်း Give it to me .. no one's gonna show me how လို့ ပရိသတ်တွေက သီဆိုကြတယ်။ ပရိတ်သတ်လဲ ခုန်လို့ မောလောက်တဲ့အခါ GIVE IT TO ME .. လို့ မက်ဒေါနားက အဆုံးသတ်ဆိုလိုက်တယ်၊ Game Over ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်လာပြီး Thank you Belgrade, good night လို့ မက်ဒေါနားက နှုတ်ဆက်ရင်း ဘဲလ်ဂရိတ်ရဲ့ pop dance ညတစ်ညကို ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ် သုံးသောင်းကျော်လောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်။ အူးစ်ချက်ပန်းခြံက အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ပြောင်းဖူးပြုတ်၊ ပြောင်းဖူးမီးကင် ဆိုင်တွေ၊ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေမှာ လူတွေ တိုးဝှေ့ရင်း ၀မ်းဗိုက်ဆာလောင်မှုကိုဖြည့်တင်းကြရင်းနဲ့ အိမ်အပြန်လမ်းမဆီ အရောင်စုံလူငယ်တွေ အလုအယက် ခပ်သုတ်သုတ်ခရီးနှင်ကြပြီ။ ။
Fashion Magazine, December, 2009
very good. you must be journalist. you can write very detail and powerful. write more please!
ဟိုတလောက G n R လာဆိုသွားတယ်။။